February 25, 2020 - Hargeele - Wararka Somali State
Somali schoolgirl was ‘pushed around’ before drowning, inquest told – The Guardian
Somali News February 25, 2020
Somali schoolgirl was ‘pushed around’ before drowning, inquest told The GuardianSii akhriso
Kooxaha Napoli iyo Barcelona oo dhibcaha ku qeybsaday kulankii lugta hore wareega 16-ka UCL…+SAWIRRO
Cayaaraha February 25, 2020
(Napoli) 26 Feb 2020. Kooxaha Napoli iyo Barcelona oo dhibcaha ku qeybsaday kulankii lugta hore wareega 16-ka tartanka UEFA Champions League, kaddib markii ay ku kalabaxeen bar-bardhac 1-1 ah. Qeybta hore ee ciyaarta ayaa lagu kala nastay 1-0 ay ku hoggaamineysay kooxda martida loo ahaa ee Napoli. Daqiiqadii 30-aad kooxda Napoli ayaa hoggaanka u qabatay ciyaarta, […]Sii akhriso
(Landan) 26 Feb 2020. Bayern Munich ayaa garoonka Stamford Bridge guul kaga soo gaartay kooxda Chelsea kulankii lugta hore wareega 16-ka tartanka UEFA Champions League, kaddib markii ay kaga adkaatay 0-3. Qeybta hore ee ciyaarta ayaa lagu kala maray bar-bardhac 0-0 ah ay isku dhaafi waayeen labada kooxood ee Chelsea iyo Bayern Munich. Qeybta labaad marka […]Sii akhriso
Ethiopia to free high-profile prisoners ‘for the national good’ – Al Jazeera English
Ethiopia News February 25, 2020
Ethiopia to free high-profile prisoners ‘for the national good’ Al Jazeera English Ethiopian crown artifact returned to Abiy by political refugee Quartz Africa Rare Ethiopian crown, hidden for 21 years in the Netherlands, returns home – The Jakarta Post Jakarta Post Ethiopia: Bomb Attack Targets Pro-Abiy Political Rally Stratfor Worldview View Full Sii akhriso
(Madrid) 25 Feb 2020. Pep Guardiola ayaa wuxuu ku dhawaaqay liiska xiddigaha kooxdiisa Man City ee kaga qeyb galaya kulanka Real Madrid ee tartanka UEFA Champions League. Pep Guardiola iyo wiilashiisa kooxda Man City ayaa waxay habeen dambe kula ciyaari doonaan Real Madrid garoonka Santiago Bernabeu si ay u wada ciyaaraan kulanka lugta hore ee […]Sii akhriso
(Rome) 25 Feb 2020. Kooxda kubadda cagta Napoli ayaa naadiga Barcelona ku soo dhoweynaysa garoonkeeda San Paolo kulanka lugta hore wareega 16-ka ee tartanka UEFA Champions League. Waxaa la shaaciyey haatan safafka rasmiga ah oo ay garoonka ku soo geli doonaan ee kooxaha Napoli iyo Barcelona. Haddaba halkaan hoose ka eeg safafka labada kooxood oo […]Sii akhriso
(London) 25 Feb 2020. Kooxda kubadda cagta Chelsea ayaa naadiga Bayern München ku soo dhoweynaysa garoonkeeda Stamford Bridge kulanka lugta hore wareega 16-ka ee tartanka UEFA Champions League. Waxaa la shaaciyey haatan safafka rasmiga ah oo ay garoonka ku soo geli doonaan ee kooxaha Chelsea iyo Bayern München. Haddaba halkaan hoose ka eeg safafka labada […]Sii akhriso
Bristol’s Somali men open up about mental health – BBC News
Bristol’s Somali men open up about mental health BBC NewsSii akhriso
(Madrid) 25 Feb 2020. Macalinka kooxda kubadda cagta Real Madrid ee Zinedine Zidane ayaa ammaanay dhigiisa leyliga Manchester City ee City Pep Guardiola kahor kulanka ay habeen dambe wada ciyaari doonaan. Real Madrid ayaa habeen dambe ku soo dhaweyn doonta Manchester City garoonka Santiago Bernabeu, si ay u wada ciyaaraan kulanka lugta hore wareega 16-ka ee […]Sii akhriso
Ethiopia Drops Dozens of Graft, Rights Violations, Coup Cases – Bloomberg
Ethiopia Drops Dozens of Graft, Rights Violations, Coup Cases BloombergSii akhriso